🥇 ▷ Tilmaamaha cusub ee Final Fantasy VIII Remastered, oo imanaya berrito Xbox One ✅
Tilmaamaha cusub ee Final Fantasy VIII Remastered, oo imanaya berrito Xbox One
Berrito ku soo noqo Xbox One, qaab qaab dhijitaal ah, mid ka mid ah ciyaaraha RPG-ga ugu caansan ee taariikhda: Fantasy Final FIIXA VIII. Qaybtan dib loo cusboonaysiin doono ayaa la siidaayaa iyada oo ay weheliso horumarin isdaba joog ah taas oo Square Enix isku dayday in ay laqabsato ciyaarta oo ka dhigaysa mid aad ugu sahlan isbeddelada ciyaartoyga haatan jira. In kasta oo kuwa doonaya inay ku raaxaystaan ​​muuqaalka ciyaarta sida markii hore loo uuray, haddana way sameyn karaan si cad iyaga oo aan adeegsan xulashadan.
Fantasy Final VIII Remastered waxaa ku jira astaamaha soo socda si kor loogu qaado khibradda ciyaarta:
Dagaalada fudud Baararka VIT iyo BTC waxay buuxiyeen ugu badnaan si isdaba joog ah xadadkuna markasta waa la heli karaa.
La’aan la’aan Ikhtiyaar la’aan iyada oo aan lala kulmayn si nasiib ah oo taariikhda loogu raaxeysto iyadoon wax carqalad ah la sameyn. Xitaa iyada oo si lama filaan ah loola kulmayo naafonimo, wali waa suurtogal in lagu raaxeysto dagaalka dhacdooyinka sheekada.
Xawaaraha (x3): Ciyaarta ayaa si dhaqso leh u socota seddex jeer.
Intaa waxaa sii dheer, gaar ahaan loogu talagalay Daabacaadda Steam, haddii ay noqoto ikhtiyaarkaaga, waxaad lahaan doontaa taxane howlo dheeri ah: Waxyaabaha (bixi dhammaan waxyaabaha, marka laga reebo), Xirfadaha, heerka GF ee ugu sarreeya, Guiles ugu sarreeya, Magic Maximum, Xadka iyo Waraaqaha (Bixi inta ugu badan kaararka, marka laga reebo kuwa
«Final Fantasy VIII Remastered wuxuu u dabaal dagayaa sanad-guuradiisii ​​labaatanaad isagoo u dhaqaajinaya ciyaartan doorka ciyaarta ah oo lagu mahadiyo aaladaha casriga ah ee leh sawirada cusboonaysiinta ee ka dhigaya jilayaasha ciyaarta inay noolaadaan weligood sidii hore. Ciyaartoydu waxay geli doonaan kabaha Squall Leonhart, oo ah murashax u tartamaya Seed, iyo Rinoa Heartilly, oo iska leh iska caabbinta, halka ay si wada jir ah uga wada dagaallamayaan sidii adduunka looga badbaadi lahaa qaran jabka badan ee Galbadia.